Somaliland: Khasaaraha Dagaal Beelo Walaalo ah Ku Dhexmaray Koonfurta Gobolka Sool - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Khasaaraha Dagaal Beelo Walaalo ah Ku Dhexmaray Koonfurta Gobolka Sool
Sida ay sheegayaan wararka ka imanaya deegaannada Xidhxidh iyo Dharkeyn-geenyo ee Koonfurta gobolka Sool, ayaa sheegay in dagaal qadhaadhi halkaas ku dhexmaray laba beelood oo walaalo ah, kaas oo sababay khasaare ballaadhan oo aan ilaa iyo hadda xaqiiqdiisa la haynin.
Wararku waxa ay intaas ku darayaan inuu dagaalku ka bilaabmay is rasaasayn kooban oo dhexmartay laba kooxood oo labada beelood kasoo jeeda, balse markii dambe si weyn la isugu soo gurmaday, taasina ay ballaadhisay khasaaraha.
Xogaha aanu hayno, ayaa sheegaya inay dhimashadu ku dhaw dahay 10-qof oo labada dhinac ah, halka uu dhaawucuna intaas ka badan yahay, waxana kooban warka halkaas laga helo, maadaama meeshu tahay magaalooyinka ka durugsan, isla markaana ay kooxihii dagaallamay weli is hor fadhiyiaan.
Ciidamada qaranka Somaliland, ayaa lagu soo warramayaa inay dhaqdhaqaaq sameeyeen, balse lama xaqiijin inay si rasmi ah u kala dhex galeen beelaha dagaallamay, waxase lagu wadaa inay ilaa maanta ku guulaystaan inay dhex fadhistaan amaba la wareegaan goobaha isku dhacu ka socdo.
Beelaha haatan isku dhacay oo halkaas wada dega ayaa marar badan sidan oo kale isugu dhacay, waxana ay is gaadhsiiyeen khasaareyaal baaxaddoodu kala duwanayd, iyada oo ay xukuumaddu kala dhex gashay, balse waxa aan weli xal waara loo helin hakinta aanooyinka labadaas beelood iyo ugaadhsiga ay isku hayaan oo mar walba sabab u noqdo inay dagaal sidan oo kale ah isku wajahaan.